Wararka – Page 29 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Somaliland oo Shaki Galisay Dalka iyo Waqtiga La Qabanayo Wada-hadalka
Xukuumadda Somaliland ayaa war kasoo saartay wada-hadalka Dowladda Dhexe ee Soomaaliya iyo Maamulka. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), oo warbaahinta kula hadlay Magaaladda Hargeysa ayaa sheegay ilaa hadda wakhti rasmi ah loo cayimin. Wasiirka ayaa sidoo kale ka gaabsaday wadanka martigalin doona wada-hadalka xili la hadal hayo in midkood Turky-ga ama Ghana lagu qaban ...
Faah-faahin:-30-ruux oo Ku Dhimatay Dagaalka Gobolka Shabeelaha Dhexe
Waxaa saakay dagan xaaladda deegaanka Burdheere ee Gobolka Shabeelaha dhexe oo shalay ay ku dagaalameen Labo maleeshiyo Beeleed oo walaalo ah. Dagaalkaan ayaa salka ku haya lahaanshaha dhul,waxaana shalay oo dhan deegaanka ka socday dagaal u dhaxeeyay Labadda dhinac. Dagaalka ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Inta la xaqiijiyay 30-qof ayaa ...
Dhageyso:-Warka Subaxnimo Radio Simba Magaaladda Muqdisho
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Isniin ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 18-01. 2019
Al-shabaab oo La Wareegay Deegaanka Dhanaane ee Shabeelaha Hoose
Dagaalyahanadda Xarakadda Al-shabaab ayaa muddo kadib la wareegay Deegaanka Dhanaane ee Gobolka Shabeelaha Hoose oo bilihii aynu soo dhaafnay ay ku sugnaayeen Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya. Ciidamadda Dowladda Soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la’aan 4-bilood ah ayaa deegaanka isaga soo baxay galinkii dambe ee shalay. Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab ayaa xalay maqribkii dib ula wareegay gacan ...
Dowladda Soomaaliya oo Shacabka Muqdisho Ka Raaligalisay Xirnaashihii Wadooyinka
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa ka war bixiyay natiijada booqasho labo maalin qaadatay oo dalka uu ku yimid madaxwaynaha dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle. Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo si qota dheer uga war bixiyay xariirka walaatinnimo ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab, ayaa sheegay intii lagu guda ...
Ciidamadda DFS oo Kasoo Baxay Furumaha Dagaalka, Shabaab oo Laga Cabsi qabo in ay La Wareegaan
Ciidamada qaybta 12ka April ee Xoogga dalka Soomaaliya ayaa galabta soo baneeyay farumaha dagaalka degaanka dhanaane ee Gobalka Shabeelaha Hoose ilaa Xeebta Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho. Ciidamada waxay ka cabanayaan mushaar la’aan, muddo afar bilood ah,islamarkaana deegaanka loogu dilay Taliyihii qaybta, laba Ammaan duule, Saraakiil iyo Ciidan kale. Saraakiil ka tirsan Malatariga Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in muddo afar ...
War Deg Deg:-Qarax Ka Dhacay Duleedka Magaaladda Muqdisho
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax goordhaweyd ka dhacay Deegaanka Weydow ee Duleedka Magaaladda Muqdisho. Qaraxaan oo dhulka ku aasnaa ayaa qabsaday mid kamid ah gaadiidka dagaalka Ciidamadda AMISOM oo halkaas marayay. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal, qaraxa kadib ciidamadda AMISOM ayaa furay rasaas fara badan. Ilaa haatan si dhab ah looma khasaaraha ka dhashay qaraxaan ka dhacay Deegaanka ...
Farmaajo iyo Geelle oo Xariga Kawada Jaray Dhismaha Cusub ee Safaaradda Jabuuti
Madaxweynayaasha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si wadajir ay xariga uga jaray dhismaha cusub ee Safaaradda Jabuuti ee Soomaaliya. Munaasabaddii xariga looga jarayay dhismaha cusub ee Safaaradda Jabuuti oo ay ka qeyb galeen Madaxweynayaasha labada dal, goleyaasha Dowladda iyo diblomaasiyiinta dalalka shisheeye ee Muqdisho ka hawl gala ayaa haatan ...
Ganacsade Abuukar Cilmi Juuni, oo Lagu Dilay Magaalada Cape Town
Kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay waxay dalkaas ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed. Dilkaan ayaa ka dhacay goob Ganacsi oo ku taala Magaaladda Cape Town ee dalkaas. Muwaadinka la dilay ayaa lagu magacaabi jirey Abuukar Cilmi Juuni,waxaana lagu weeraray goobta ganacsi oo afar cisho ka hor ka shaqo bilaabay. Ala u naxariistee Abuukar Cilmi ayaa ku rajo ...
Shacab Dilay Sarkaal Ka Tirsanaa Xarakadda Al-shabaab,Shabeelaha Hoose
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ku waramaya in sarkaal ka tirsanaa Xarakadda Al-shabaab lagu dilay deegaanka Yaaqbari ee Gobalkaas. Sarkaalka la dilay ayaa shabaab u qaabilsanaa degmada Wanlla-Wayn ee Gobalka Shabeelaha Hoose,waxaana la sheegay in ay dileen dadka deegaanka. Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in sarkaalka la dilay uu dhibaatooyin ku hayay shacabka deegaanka,ugu ...
Page 29 of 1,771« First...1020«2728293031 » 405060...Last »